सभापति देउवाको कार्यक्रम वहिस्कार गर्दै इतर पक्ष - Jhilko
काठमाडौं । सभापति शेरवहादुर देउवा सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने निश्कर्षमा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष पुगेको छ । दोस्रो चरणको जागरण अभियान स्थगित गरी यथाशीघ्र १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई इतर पक्षले दबाव दिएको छ । त्यही दबाव स्वरुप देउवा सहभागी कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित नहुने निश्कर्षमा इतर पक्ष पुगेको हो । प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता खटाउँदा व्यापक पक्षपात भएकाले पहिलो चरणको जागरण अभियान सफल हुन नसकेको निश्कर्ष संस्थापन इतर पक्षले निकालेको छ ।
पहिलो चरणको जागरण अभियान जेठ २५ गते सकिँदा नसकिँदै संस्थापन पक्षले हतारहतार आगामी भदौ २४ देखि पुस १६ गतेसम्मका लागि दोस्रो चरणको जागरण अभियानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । इतर पक्ष भने पहिलो चरणको जागरण अभियानको समीक्षामा जुटेको थियो । इतर पक्षको समीक्षा भेलाले पहिलो चरणको जागरण अभियानमा कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने गरी मात्रै दोस्रो चरणको अभियानमा जानुपर्ने निश्कर्ष मात्रै निकालेको छैन ।
दोस्रो चरणको जागरण अभियान र स्थानीय तहको अधिबेशन सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ । यही असारको दोस्रो साता बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो एजेण्डा जोड–तोडका साथ उठाउने र संस्थापन पक्षले आत्मसात नगरे सभापति देउवा सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय पनि संस्थापन पक्षले गरेको छ ।
गत शुक्रबार नुवाकोट जिल्लामा आयोजित आमसभामा सभापति देउवा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थिति थिए । तर, जिल्लाकै केन्द्रीय हस्ती डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसी सहभागी भएनन् । केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. महत र केसी सहभागी नभएपछि कार्यकर्तामा ठूलो कौतुहल उत्पन्न भएको थियो । यस विषयमा जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई कार्यकर्ताहरुले प्रश्न राखेका थिए । उनले भने– ‘उहाँहरु दुवै जनालाई जिल्लावासीको नाताले पनि हामीले निमन्त्रणा पठाएका थियौं । सभापति देउवा सहभागी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय संस्थापन इतर पक्षका केन्द्रीय नेताहरुले गरेको मैले सुनेको थिएँ, त्यसैले मैले उहाँहरुलाई लिएर आउन सभापति देउवाजीलाई मौखिक रुपमा समेत आग्रह गरेको थिएँ, तर देउवाजीले एक कल टेलिफोन समेत गर्नु भएन छ ।’
एक आपसमा बोलचाल समेत नगर्ने डा. महत र केसीले सभापति देउवालाई आफ्नै गृहजिल्लामा बहिस्कार गर्ने मामिलामा भने कार्यगत एकता देखाएका छन् । नुवाकोट जिल्लामा मात्रै होइन, सबैजसो जिल्लामा पञ्चायतकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसमा दुई वटा प्यानल हुने गर्दथे । दुई प्यानलमध्ये एक प्यानल संस्थापन पक्षको र अर्को प्यानल संस्थापन इतर पक्षको हुने गर्दथ्यो । तर, गत आम निर्वाचनपछि भने अधिकांश जिल्लाका दुई वटै व्यानल संस्थापन पक्ष अर्थात सभापति देउवाको विपक्षमा छन् ।
उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौं जिल्लामा सभापति सवुज बानियाँको एउटा प्यानल छ भने पूर्व सभापति भीमसेनदास प्रधानको अर्को प्यानल छ । यी दुवै प्यानल सभापति देउवाको खिलाफमा छन् । काभ्रे जिल्लामा सभापति मधु आचार्यको एउटा प्यानल छ भने पूर्व सभापति शवि हुमागाइँको अर्को प्यानल छ । यी दुवै प्यानल सभापति देउवाको खिलाफमा छन् । तनहुँ जिल्लामा सभापति बैकुण्ठ न्यौपानेको एउटा प्यानल र भानु नगरपालिकाका मेयर उदयराज गौलीको अर्को प्यानल छ । यी दुवै प्यानल सभापति देउवाको खिलाफमा छन् ।
देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा समेत यस्तै अवस्था छ । सभापति कर्ण मल्ल र पूर्वसभापति रघुवर भट्टका अलगअलग प्यानल छन् । यी दुवै प्यानल सभापति देउवाको खिलाफमा छन् । कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, ओखलढुंगा, धनकुटा लगायत करिव ४१ वटा जिल्लामा दुवै वटा प्यानल आफ्नो खिलाफमा रहेका कारण पनि सभापति देउवा १४ औं महाधिबेशनमा जान डाराएका हुन् ।
आफ्नो कार्यकाल डेढ वर्ष थप्ने र त्यसपछिको महाधिबेशनमा पनि आफै सभापति पदमा उमेदवार हुने घोषणा सभापति देउवाले गरिसकेका छन् । केन्द्रीय महाधिबेशनको मिति डेढ वर्षपछि धकेल्न पार्टी विधान तथा संविधान अनुसार देउवाले सक्नेछन् । तर स्थानीय अघिबेशनको म्याद थप्न भने देउवाले विधानको धारा ३५ उल्लंघन गर्नै पर्ने हुन्छ । उक्त धारामा केन्द्रीय महाधिबेशन भन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि स्थानीय अधिबेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधान पूरा गर्नका लागि २०७६ सालभित्र कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको अधिबेशन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि तयारी शून्य छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
सावधान ! लिची खाएर २४ घन्टामा २० बालबालिकाको मृत्यु
मोदीको प्रस्ताव संघीयता विरोधी भन्दै बामपन्थी दलहरूद्वारा अस्वीकार
नेवि संघमा भाँडभैलो ः संस्थापन र सिटौला पक्षबीच कुटाकुट,...
संस्थापन पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका विद्यार्थीबीच नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर...
चिकित्सा शिक्षा आयोगले किन रोक्यो बी एण्ड सीको सम्वन्धन...
पूर्वी नेपालको झापाबाट उदाएका चर्चित मेडिकल उद्यमी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो बिर्तामोडस्थित...